Jôba - Wikipedia
I Jôba na Joba dia olona resahina ao amin' ny Baiboly ao amin' ilay boky mitondra ny anarany (Bokin' i Jôba). Ao amin' ny Tanakh izy dia atao amin' ny teny hebreo hoe אִיּוֹב / ʾIyyôv. Ny boky masin' ny Silamo (Kor'any) koa dia miresaka an' i Jôba izay ataony amin' ny teny arabo hoe أيّوب / 'Ayyûb ). I Jôba no maneho ny finoan' olo-marina navela ho sedrain' i Satana, araka ny fanomezan-dalan' Andriamanitra (Job. 1.9-12).
I Joba, nataon'i Léon Bonnat, taona 1880
1 Tantaran' i Jôba
1.1 Tantaran'i Jôba araka ny Baiboly
1.2 Tantaran' i Jôba araka ny Kor'any
Tantaran' i JôbaHanova
Tantaran'i Jôba araka ny BaibolyHanova
Na dia olo-marina aza i Jôba (Job. 1.1), ny anarany dia avy amin'ny fizahan-toetra nataon'i Satana azy mba hijerena na hatoky an'Andriamanitra hatrany izy na tsia (Jôb. 1.1). Niaritra ny faharavan'ireo fananany (Jôb. 1.14) sy ny faharinganan'ireo zanany (Jôb. 1.18-19) ary ny fijaliany noho ny vay nahazo azy (Jôb. 2.7). Nanana zanakalahy fito sy zanakavavy telo i Joba (Jôb. 1.2) izay maty daholo tao amin'ny firodanan'ny tranon'ny lahimatoany tamin'ny fiandohan'ny fitsapana (Jôb. 1.18-19). Niaritra ihany koa ny fanomezan-tsiny nataon'ireo sakaizany telolahy azy izy nefa tsy niala tamin'ny fitokisany amin' Andriamanitra. Hohazavain' Andriamanitra aminy fa tsy tokony ho refesin'ny fijerin'olombelona ny fitsarany, ary haverina roa heny amin'i Jôba indray ny fananany. Hahazo zazalahy fito sy zazavavy telo indray i Jôba rehefa vita ny fisedrana azy. Ireo zananivavy telo farany dia atao hoe Jemima sy Ketsia ary Kerena-Hapoka (Job. 42.14).
Tantaran' i Jôba araka ny Kor'anyHanova
Ny Kor'any dia miresaka an' i Aioba (arabo: 'Ayyoûb) ho mpaminany ambony toetra sy malala-tanana. Tia azy fatratra Andriamanitra tsatria iray amin'ireo mpanompo be fanetren-tena sy manompo amim-pahatsoratra izy. Nanampy ny kamboty izy, ary nanome sakafo ny mahantra. Hitan' i Satana ny fanoloran-tenan' i Aioba amin' Andriamanitra, ka nanapa-kevitra i Satana hitarika azy amin'ny tsy izy nefa tsy nahomby izany. Nataony toraka izany koa ny vadiny atao hoe Rahma nefa tsy nahomby koa izany. Nianjadian'ny fahoriana mafy i Aioba ka nijaly tamim-paharetana.
Izao no voasoratra ao amin'ny Kor'any:
"Tsarovy koa i Aioba mpanompontsika, tamin'ny nanaovany izao teny izao tamin'ny Tompony: Nataon' i Satana reraky ny aretina maro sy ny fampijaliana aho. Nisy feo niteny mafy taminy hoe: Kapohy amin'ny tongotrao ny tany. Dia nataony izany, ka nisy loharano nifantsitsitra. Hataonao hidiovana io rano io; mangatsiatsiaka io, ary hisotro aminy ianao. Naverintsika aminy ny ankohonany, sady nampiantsika mitovy amin'izay nisy teo. Porofon'ny famindram-pontsika izany sady fampitandremana ho an’ny olona manan-tsaina (Ny Kor'any, « Sad », 38.40-44).
↑ Ny Torka dia manao hoe Eyüop.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jôba&oldid=1010364"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 04:52
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 04:52 ity pejy ity.